Awood-siyeyaal Sare oo Rakhiis ah Shirkado & Bacrimin Bacriminta Qalabka Mashiinka iyo Warshad | YiZheng
Ku Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Noolaha Organic & Compound U adeegso si buuxda xoogga aerodynamic ee ay soo saaraan xawaaraha sare ee rogrogmada farsamooyinka mashiinka dhululubo ah si qalabka wanaagsan looga dhigo isku-darka joogtada ah, kala-soocidda, spheroidization, extrusion, shilalka, isafgarad iyo xoojin, ugu dambayntii noqo granules
Muxuu Yahay Nooca Cusub ee Nooleyaha & Xarunta Bacriminta Granulator?
Ku Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Noolaha Organic & Compound waa qalab ka kooban inta badan loo isticmaalo soo saarida bacriminta isku dhafan, bacriminta dabiiciga ah, Bacriminta bayoolojiga, Bacriminta la sii daayo ee la xakameeyo, iwm .Waxay ku habboon tahay soosaarida ballaaran ee qabow iyo kulul iyo soo saarista bacriminta isku-dhafka sare, dhexdhexaad iyo hooseeya.
Qaabka ugu muhiimsan ee shaqada waa kaawada qoynta granulation. Iyada oo loo marayo biyo tiro ah ama uumiga, bacriminta aasaasiga ah ayaa si buuxda kiimiko ahaan looga falceliyaa ka dib marka lagu xiro dhululubo. Xaaladaha dareeraha ah ee la dejiyey, wareegga dhululubada waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo walxaha walxaha Waxay soo saartaa xoog wax burburinaysa oo agglomerate ka dhigeysa kubadaha.
Waa maxay granizer-ka cusub ee loo yaqaan 'granulator bacriminta'?
Tani Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Noolaha Organic & Compound waa shey cusub oo shati shati ah oo ay soo saareen shirkadeena iyo Machadka Cilmi baarista Mashiinka Beeraha. Mashiinku ma awoodi karo oo keliya inuu alaabo noocyo kala duwan oo dabiici ah, gaar ahaan qalabka fiber-ka oo ay adag tahay in lagu dhajiyo qalabka caadiga ah, sida cawska dalagga, haraaga khamriga, hadhaaga boqoshaada, haraaga daroogada, digada xoolaha iyo wixii la mid ah. Kala soociddu waa la sameyn karaa halsano ka dib, sidoo kale waxaa lagu gaari karaa saameynta ugu wanaagsan ee samaynta hadhuudhku ay ku yeelato aashitada iyo qashinka degmada.
Noocyada Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Noolaha Dabiiciga ah & Xarunta
Heerka sameynta kubbadda waa illaa 70%, awoodda kubbadda waa sarreysaa, waxaa jira qaddar yar oo ah alaab soo noqosho ah, cabbirka maaddada soo celinta waa yar tahay, pellet-ka dib ayaa loo soo celin karaa
Nooca Cusub Khadka Waxsoosaarka Bacriminta Qeybinta Bacriminta Organic & Compound Halkan waxaan ku siin karnaa
10,000-300,000 tan / sanadkii Khadkii wax soo saar ee bacriminta xarunta NPK
10,000-300,000 tan / sanadkii khadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah
10,000-300,000 tan / sanadkii isku darka khadka waxsoosaarka bacriminta
10,000-300,000 tan / sanadkii ammonia-acid geedi socodka, Urea oo salka ku haysa soosaarka bacriminta xarunta
10,000-200,000 tan / sanadkii digada xoolaha, wasakhda cuntada, qashinka iyo waxyaabaha kale ee lagu daweeyo qashinka dabiiciga ah iyo qalabka kala soocida
Nooca Cusub Soo Bandhigga Muuqaalka Video-ga ee Bacriminta Qalabka Bacriminta
Nooca Cusub Xulashada Nooca Organic & Xarunta Bacriminta Granulator
Isugeynta Guud (mm)
Hore: Disc Organic & Xarunta Bacriminta Granulator
Xiga: Nooca Cusub ee Mashiinka Granulator Bacriminta Nadiifiyaha & Xarunta
Hordhac Muxuu Yahay Qabyo Qoraalka Qaboojiyaha Heerkulka Warshadaha? • Tamarta iyo korontada: Warshada korantada ee kuleylka ah, Warshadda Qashinka baabi'isa Qashinka, Warshad tamarta shidaalka Biomass, Qalabka soosaarka kuleylka qashinka Warshadaha • Macdanta birta: Hawo afuufaya macdanta oo daadinaysa (Mashiinka Sintering), Soosaarka Coke ee Foornada (Furna ...